कसरी छविमा रूपान्तरण गर्ने, चरण-देखि चरण ट्यूटोरियल | ग्याजेट समाचार
जहिले पनि, हरेक चोटि हामी आफ्नो उपकरणहरू अनुकूलित गर्न चाहन्छौं, मात्र अपरेटिंग सिस्टम जसले हामीलाई अनन्त सम्भावनाहरू प्रदान गर्दछ माइक्रोसफ्टको विन्डोज हो। दुबै इन्टरनेटमा र एप्लिकेसन स्टोरमा नै, हामीसँग अधिकार छ हाम्रो विन्डोज को प्रतिलिपिलाई अनुकूलन गर्न अनुप्रयोगहरूको ठूलो संख्या.
जहाँसम्म, यदि हामी विभिन्न विषयवस्तुहरू, जस्तै टेलिभिजन श्रृंखला, चलचित्रहरू, खेलहरू, एनिमे वा अन्य कुनै थिमको अनुप्रयोगहरू हेर्छौं भने, चीजहरू धेरै जटिल हुन्छन्, किनकि यी प्रकारका अनुप्रयोगहरू भेट्टाउन धेरै गाह्रो हुन्छ, यदि तिनीहरू कुनै ठाउँमा आइपुगे भने। अवस्थित यदि तपाइँ तपाइँको विन्डोज १० कम्प्युटरलाई अनुकूलित गर्न चाहानुहुन्छ, तब हामीले गर्न सक्ने उत्तम कार्य आइकनहरू मार्फत गर्नुहोस्। यहाँ हामी तपाईंलाई देखाउँदछौं कसरी छवि एक प्रतिमा रूपान्तरण गर्न।
निश्चय पनि यदि हामी एक विशेष थिमका अनुयायीहरू हौं भने, हामी हाम्रो टिमलाई केवल त्यस थिमको वालपेपरको साथ निजीकृत गर्न चाहन्छौं, तर हामी यसलाई मनपर्न पनि सक्छौं। प्रत्येक र प्रत्येक आइकन अनुकूलन गर्नुहोस् फोल्डर वा अनुप्रयोग जुन हामी प्राय: आफ्नो कम्प्युटरमा केहि छविहरूको साथ प्रयोग गर्छौं।
विन्डोजले हामीलाई कुनै पनि छवि फोल्डर वा अनुप्रयोगको आइकनको रूपमा प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ, जबसम्म हामीसँग आवश्यक धैर्यता र संसाधनहरू छन् जबसम्म यो प्रक्रिया पूरा गर्न सक्षम हुन सक्दछ। जे होस् सुरूमा यो जटिल छैन, यसको लागि प्रक्रियाहरूको एक श्रृंखला आवश्यक छ र आवश्यकताहरू जुन हामी भुल्न सक्दैनौं।
1 कसरी एउटा प्रतिमामा छवि रूपान्तरण गर्ने
2 विन्डोजमा कसरी अनुप्रयोग आइकन परिवर्तन गर्ने
3 विन्डोजमा डेस्कटप आइकनहरूको आकार कसरी बदल्ने
कसरी एउटा प्रतिमामा छवि रूपान्तरण गर्ने
सबैभन्दा पहिले, हामीले दिमागमा राख्नु पर्छ कि यदि हामी एक उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त गर्न चाहन्छौं र आइकन यस्तो देखिन्छ कि यो पेशेवरले बनाएको हो भने, प्रश्नमा छवि, PNG ढाँचामा हुनुपर्दछ र कुनै पनि पृष्ठभूमि बिना हामीले देखाउन चाहेको फिगर वा चरित्रको सिल्हूट देखाउनुहोस्।
PNG ढाँचाले हामीलाई पारदर्शी पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि प्रदान गर्दछ जब प्रतिमा ढाँचामा रूपान्तरण गरियो, क्यारेक्टर वा फिगरको सिल्हूट मात्र देखाउँदछ जुन हामी हाम्रो टीमको आइकनको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छौं। यदि तपाईं आफ्नो जीवनलाई जटिल बनाउन चाहनुहुन्न भने, हामी उत्तम गर्न सक्दछौं गुगलको खोज खोजीको अन्त्यमा PNG थप गरेर।
एकचोटि हामीले प्रश्नको तस्विर भेट्टाएपछि हामी प्रतिमामा परिवर्तन गर्न चाहान्छौं फाइललाई BMP ढाँचामा रूपान्तरण गर्नुहोस्। यस चरणलाई छवि प्रयोग गर्न सक्षम हुन पूर्ण रूपमा आवश्यक छ जस्तो कि यदि यसलाई पछि प्रक्रिया गर्नका लागि एउटा आईकन हो, किनकि अन्यथा विन्डोजले यसलाई पढ्न सक्षम हुने छैन।
एक पटक हामीले PNG छविलाई BMP ढाँचामा रूपान्तरण गर्‍यौं, हामीले भर्खरै गर्नु पर्छ फाइल विस्तारलाई .BMP बाट .ico मा परिवर्तन गर्नुहोस्। फाइल एक्स्टेन्सन परिवर्तन गर्नका लागि, हामीले एक पटक मात्र फाइलनाममा क्लिक गर्नुपर्नेछ नाम सम्पादन सक्षम गर्नका लागि। वा, हामी यसलाई माउसको साथ चयन गर्न सक्छौं र F2 थिच्न सक्छौं।
यदि एक्स्टेन्शन ढाँचा देखाइएको छैन भने हामीले ब्राउजरको माथि जानु पर्छ र बक्स जाँच गर्नु पर्छ विस्तारहरू देखाउनुहोस्। यस विकल्पले नेटिभ असक्षम पारिएको छ प्रयोगकर्ताहरूलाई अपरेटिंग प्रणालीको केहि पक्षहरू परिमार्जन गर्नबाट रोक्नको लागि आवश्यक ज्ञान नभएसम्म।
यदि हामी PNG बाट Iico मा सिधा फाईल परिवर्तन गर्छौं भने विन्डोजले फाइल ढाँचा पढ्न सक्षम हुने छैन, र यसले हामीलाई सिर्जना गरेको तस्बिर देखाउँदैन। यो किनभने सबै आईकनहरू BMP ढाँचामा सिर्जना गरिएको हो, विन्डोजले हामीलाई प्रस्ताव गरेको आईकनहरूसँग उपयुक्त ढाँचा।
विन्डोजमा कसरी अनुप्रयोग आइकन परिवर्तन गर्ने
यदि उसले सोच्यो कि छविलाई आइकनमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया जटिल छ भने, हामीले सिर्जना गरेका आईकनहरूको लागि अनुप्रयोगहरू वा फोल्डरहरूको आइकन परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया धेरै सरल छ र यसलाई विन्डोजको विस्तृत ज्ञानको आवश्यकता पर्दैन।
सर्वप्रथम, हामीले अनुप्रयोग, फाइल फोल्डरमा क्लिक गर्नुपर्नेछ जुन हामी आइकन प्रतिस्थापित गर्न चाहन्छौं जुन यसले हामीलाई जन्मजात देखाउँदछ।
अर्को, हामी फाईल, अनुप्रयोग वा फोल्डरमा माउस राख्छौं र दायाँ माउस बटन प्रेस गर्न पहुँच गुणहरू.
अर्को, हामी अनुकूलन ट्याबमा क्लिक गर्दछौं र हामी जान्छौं फोल्डर आइकनहरू र क्लिक गर्नुहोस् आइकन परिवर्तन गर्नुहोस्। त्यो क्षणमा, हामीले फाइललाई .ico ढाँचामा खोज्नुपर्नेछ जुन हामी छविको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छौं र हुन्छ मा क्लिक गर्नुहोस्।
त्यस क्षणदेखि, अनुप्रयोगको आइकन, फोल्डर वा फाइल, छवि देखाउँनेछ जुन हामीले आइकनमा परिवर्तन गरेका छौं, यसको सञ्चालनलाई असर नगरी।
विन्डोजमा डेस्कटप आइकनहरूको आकार कसरी बदल्ने
हाम्रो उपकरणको रिजोलुसनमा निर्भर, यो सम्भव छ कि अन्तिम परिणाम हामीले सुरुमा सोचेको भन्दा सानो देखिने छ। भाग्यवस, विन्डोज, असीमित कन्फिगरेसन विकल्प भित्र जुन यसले हामीलाई प्रदान गर्दछ, हामीलाई तिनीहरूको आकार परिवर्तन गर्न अनुमति दिन्छ।
समस्या, तपाइँ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ त्यसमा निर्भर गर्दै, जब यो प्रक्रिया प्रदर्शन गर्दा, सबै आईकनको आकार पनि परिमार्जन गरियो, त्यसैले हामी यो प्रक्रिया केवल एक विशिष्ट आइकनमा प्रदर्शन गर्न सक्दछौं। आइकनहरूको आकार परिवर्तन गर्न हामीले निम्न चरणहरू गर्नुपर्दछ:
पहिले, हामीले डेस्कटपको क्षेत्रमा क्लिक गर्नुपर्नेछ जहाँ त्यहाँ कुनै आईकनहरू छैनन्।
अर्को, पप-अप मेनू भित्र देखा पर्नेछ, दृश्य मा क्लिक गर्नुहोस्।
ड्रप-डाउन मेनूमा हामीले प्रतिमाको आकार छान्नुपर्दछ। पूर्वनिर्धारित द्वारा, विन्डोज १० ले हामीलाई मध्यम आकार, हामीले गर्न सक्ने साइज देखाउँदछ ठूलो वा सानो परिवर्तन गर्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » ट्यूटोरियलहरू » छविलाई प्रतिमामा रूपान्तरण कसरी गर्ने